ကိုဗစ်ဆေးစစ်မှု Negative ဖြစ်တဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းသားတွေကို အပျော်ကြူးပြီး မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးလာတဲ့ ဥက္ကဌ ကျော်သူ - Cele Connections
ကိုဗစ်ဆေးစစ်မှု Negative ဖြစ်တဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းသားတွေကို အပျော်ကြူးပြီး မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးလာတဲ့ ဥက္ကဌ ကျော်သူ
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျော်သူကတော့ အနုပညာလောကတစ်လောကလုံးက လေးစားအားကျရသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကျော်သူက COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကျော်သူက သူ့ရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းသားတွေကို Negative ဆိုပေမယ့် အပျော်ကြူးပြီး မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး “N” ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့။ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုးလှမ်းကြသလို ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ သတိ! အသိ! အမြဲ ရှိ! ကျော်သူ( ခေတ္တ ဝေဘာဂီ)” ဆိုပြီး ဥက္ကဌတစ်ယောက်အနေနဲ့ သတိပေးစကား ဆိုထားပါတယ်။
ကျော်သူကတော့ သူကိုယ်တိုင် Positive ဖြစ်နေပေမယ့် နာရေးကူညီမှုအသင်းသားတွေရဲ့ Negative ဖြစ်တာကြောင့် ထပ်တူဝမ်းသာနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူလည်း မကြာခင် အချိန်အတွင်း ဆေးရုံကဆင်းပြီး နေမြန်မြန်ကောင်းလာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဗဈဆေးစဈမှု Negative ဖွဈတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသငျးသားတှကေို အပြျောကွူးပွီး မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးလာတဲ့ ဥက်ကဌ ကြျောသူလညျး အမွနျဆုံး ရောဂါကငျးရှငျးပါစေ..
နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကြျောသူကတော့ အနုပညာလောကတဈလောကလုံးက လေးစားအားကရြသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ကြျောသူက COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစကျခံခဲ့ရတာကွောငျ့ ဝဘောဂီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ကြျောသူက သူ့ရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသငျးသားတှကေို Negative ဆိုပမေယျ့ အပြျောကွူးပွီး မပေါ့ဆဖို့ သတိပေးလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
“N ကှ! ဆိုတော့ မငျးတို့နညျးတူ ငါလညျးဝမျးသာမိတာပေါ့ကှာ။ ဒါပမေယျ့ ဒါတဈသကျလုံး “N” ဖွဈသှားတာမဟုတျဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကွီးတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ … ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုကျ တယျ။ ဝမျးသာတယျဆိုပွီး အပြျောမကွူးကွနဲ့။ မပေါ့ကွနဲ့။ လှတျလပျပွီဆိုပွီး လမျးမထှကျ ဆေးရိုးလှမျးကွသလို ဖွဈကုနျတော့မယျ။ သတိ! အသိ! အမွဲ ရှိ! ကြျောသူ( ခတ်ေတ ဝဘောဂီ)” ဆိုပွီး ဥက်ကဌတဈယောကျအနနေဲ့ သတိပေးစကား ဆိုထားပါတယျ။
ကြျောသူကတော့ သူကိုယျတိုငျ Positive ဖွဈနပေမေယျ့ နာရေးကူညီမှုအသငျးသားတှရေဲ့ Negative ဖွဈတာကွောငျ့ ထပျတူဝမျးသာနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြျောသူလညျး မကွာခငျ အခြိနျအတှငျး ဆေးရုံကဆငျးပွီး နမွေနျမွနျကောငျးလာပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။